Indlela yokufaka iTrows Browser kwi-Ubuntu 17.04 | Ubunlog
Ubumnyama | | software
Kulabo bachaphazelekayo malunga nokukhuseleka kwedatha yabo kwinethiwekhi okanye abo bathanda ukukhangela ngokungaziwa kuloo micimbi yentengiso kukho isikhangeli ijolise kwezi nkcukacha kufunwa ngabasebenzisi abaninzi kwizikhangeli zangoku.
I-Tor is esbrbrowser iwebhu ezimeleyo kunye neplatifomu, isekwe kwiFirefox kwaye ihlaziyiwe kwinguqu yayo yesixhenxe, izinzile ngakumbi nangokuphuculwa ngakumbi kwimicimbi yezokhuseleko kunye nemfihlo yabasebenzisi.
I-Tor isekwe kwinjongo, eyila inethiwekhi yonxibelelwano apho ukhuseleko kunye nedatha yabasebenzisi ikhuselweyo, engazivezi ubunikazi babo, oko kukuthi, idilesi ye-IP kunye nayo, kugcina ukuthembeka kunye nemfihlo yolwazi ohamba ngayo.
1 Faka iTrows Browser kwi-Ubuntu 17.04
1.1 Kwiinkqubo ezingama-32.
1.2 Kwiinkqubo ezingama-64.
Faka iTrows Browser kwi-Ubuntu 17.04
Ngokunikwa inkcazo emfutshane malunga neprojekthi yeTor, siyaqhubeka nokuchaza ukufakwa kwesi sikhangeli kwinkqubo yethu.
Kuqala kuya kufuneka sivule i-terminal kwaye senze le miyalelo ilandelayo, exhomekeke kuhlobo lolwakhiwo abalusebenzisayo, iya kuba lolunye olubonisiweyo kufakelo:
Kuqala kuyakufuneka senze i faka ukhuphelo lwephakheji ukuba iTor isinika ngokuthe ngqo kwaye unzip ifayile xa ukhuphelo lugqityiwe.
tar -xvf tor-browser-linux32-7.0_es-ES.tar.xz
Emva koko sizibeka ngaphakathi kwifolda esingayityhilanga kwaye siqhuba isikhangeli.
Kwiinkqubo ezine-64-bit yoyilo, inkqubo efanayo iyasebenza, kuphela ukuba sikhuphele iphakheji ebonisiweyo kolu lwakhiwo.
tar -xvf tor-browser-linux64-7.0_es-ES.tar.xz
Xa usenza lo myalelo, imeko yemizobo yesikhangeli iya kuvulwa, kunye nokuqala kwesikhangeli sethu esibonisa ukuba siyitshintshile IP yethu yoLuntu yenye.
Iphaneli yokuLawula iTor
Kwimeko yokufuna tshintsha idilesi yethu ye-IP yoluntu, Kuya kufuneka sicinezele kwiqhosha "Sebenzisa isazisi esitsha" kwaye kulungele!
Kwaye misa inkonzo, sicofa "Misa iTor".
Ngoku, singenza ukufikelela ngokuthe ngqo kwinkqubo kwaye ke siphephe ukufuna i-terminal ukuvula iTor.
Ukuba ufuna ntoni Isikhangeli esincinciKwikhonkco esisandul 'ukushiya uyakufumana ezinye zezo zisebenzisa izixhobo ezincinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Indlela yokufaka iTrows Browser kwi-Ubuntu 17.04
Faka iStam ku-Ubuntu 17.04 usebenzisa iphakheji yeflppak